नेपाल आज | युट्यूबबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? जान्नुहोस् युट्यूबको नयाँ नियम
काठमाडौं । पैसा कमाउने उद्देश्यले युट्यूब च्यानल खोल्दै हुनुहुन्छ ? पर्खनुहोस् ! यूट्यूबले नयाँ नियम लागु गरेको छ ।
पहिले युट्यूबबाट १० हजार भिवर भएपछि युट्यूबबाट पैसा पाइन्थ्यो । अब युट्यूबबाट पैसा कमाउन एक वर्षमा च्यानलको एक हजार नयाँ सब्स्क्राइबर हुनुपर्ने र ४ हजार घण्टासम्म भिडियो हेरेको हुनुपर्ने छ । १ वर्षमा ४ हजार घण्टा नहेरिएका र एक हजार नयाँ सब्सक्राइब्र्स नभएका युट्यूब च्यानल पैसा कमाउनका लागि अयोग्य हुने भएका छन् ।
पैसा कमाउने उद्देश्यले युट्यूबमा जथाभावी भिडियो राखिएको भन्दै युट्यूबले नियमलाई कडाइ गर्दै बुधबारदेखि लागू गर्ने गरी नयाँ नियम बनाएको हो ।